China 10 iziqwenga Utywala / Hyamine Sula mveliso kunye nabenzi | Zhongrong
I-50ml yesandla se-Sanitizer Gel TECH-BIO
Ukusebenza kwebactericidal yale mveliso kuvavanywa ngokomgangatho wesizwe yi-arhente yokuvavanya isiqinisekiso. Izinga lokucoca ngempumelelo le mveliso ngokuchasene ne-Escherichia coli, iStaphylococcus aureus kunye neCandida albicans inokufikelela kuma-99.99% phantsi kweemeko zovavanyo umzuzu omnye. Iziphumo zereferensi.
10 Ipheokt Pakisha iipesenti ezingama-75 Autywala UWipe
Ukucaciswa kwengxowa yokupakisha ecetyiswayo:
Ubude * ububanzi * ukuphakama 160 * 95 * 15 mm
I-logo ye-TECH-BIO, igama lesiTshayina nesiNgesi
Inokucoca ulusu ngobunono ngokuthamba okuthambileyo. Kukulungele ukusula izandla, ulusu, njl., Ukukhusela impilo yosapho nangaliphi na ixesha kwiindawo ezahlukeneyo.
Igama lemvelisoIipesenti ezingama-75 zoTywala
Eyona nto iphambili kuyoI-75% yotywala （V / V 、 Amanzi acociweyo 、 Spunlace nonwoven
Sebenzisa uluhluKuyilungele ukusula izandla, ubuso, ulusu oluqinileyo kunye nomgangatho ngokubanzi wezinto. Kunqande ukuyisebenzisa emehlweni, amanxeba kunye nezinye izinto ezibuthathaka.
Ukusetyenziswa: Krazula isincamathelisi. Yisebenzise emva kokuyikhupha kwaye uyitywine ngexesha. Ixesha lesenzo lezandla ngu-≤1min, ixesha lesenzo sesikhumba esinganyangekiyo yi -5min, kunye nexesha lesenzo sezinto eziqhelekileyo yi -30min.
Isilumkiso:: Gcina kwindawo epholileyo neyomileyo. Ukusetyenziswa kwangaphandle, thintela umlomo kunye nokunxibelelana ngamehlo. Ukutsha, thintela ubushushu obuphezulu okanye umthombo womlilo. Abantu abangadibaniyo notywala babusebenzisa ngononophelo. Gcina kude nokufikelela kwiintsana kunye nabantwana abancinci. Nceda uyibeke emgqomeni wenkunkuma emva kokusetyenziswa. Musa ukugungxula kwindlu yangasese ukunqanda ukuvaleka. Iintsana ezingaphantsi kweminyaka emi-3 ubudala akufuneki zisetyenziswe.
Umgangatho wezempiloI-GB 15979
Umgangatho olawulayo:GB / T 27728-2011
Ukucaciswa kwemveliso:200mm X 150mm
Umxholo womnatha: 10pcs
Ixesha lokusebenza: Iminyaka emibini
Inombolo yemveliso Jonga ukupakisha
Umhla wokusebenzisa othintelweyo: Jonga ukupakisha
Ugunyazisiwe nguZhongrong Technology Co.Intloko Ltd.
Yongeza: Inombolo 1, i-Changqian Road, iSithili se-Fengrun, isiXeko saseTangshan, kwiPhondo lase-Hebei
IfowuniInombolo: 021-64700127 0315-8072728
Umenzi: Jinhua Changgong Ukucoca Iimveliso Co, Ltd.
Yongeza:Indawo yaseDitian esebenzayo, iXiaoshun Idolophu, iSithili saseJindong, iSixeko saseJinhua, kwiPhondo laseZhejiang
Ilayisensi yezempilo U-No: (Zhejiang) Isatifikethi soGutyulo (2018) No. 0071
Egqithileyo Amaqhekeza angama-50 oTywala / iHyamine Sula
Okulandelayo: Amaqhekeza ali-150 oTywala / iHyamine Sula